‘Zanu-PF will always come first’ | The Sunday Mail
Below we publish President Robert Mugabe’s address at the Mashonaland Central Presidential Youth Interface Meeting yesterday.
Ndinoda kuvamba nekukutendai, Youth League yedu, vadiki vedu nehurongwa, hurongwa hwamakaita kuti zuva ranhasi tinge tinemi tiri tose, takatarisana neInterface tichipanana mashoko.
Ndambotaura tichavamba, vachaisa information centre, kuti hatingauye kuno tichizoita meeting. Kana tine hurongwa hwakaita sei tisingayeuke kana kuyeuchidzana kuti kuno ndokwemhondoro yedu.
Ndiko kwakavamba Chimurenga chekutanga vachikokerwa navaMbuya Nehanda nanaKaguvi.
Ndokwakaiswa mweya wakanaka, watakazowanawo uripo isu takura zvichinzi Mbuya Nehanda havana kumboda kana kuti vadzorwe papfungwa dzavo kana kunzi iwe waakufa, waakuyenda kunosungwa, kunosungirirwa, chisvipa zvaunazvo zvese uchitarisa kunaMwari kuti uregererwe zvivi zvako.
Vakaramba kuva muKristo last moment vakati aiwa tanga tichida manamatiro edu, tichikumbira Mwari makumbiro edu nhasi uno handingazo chinje handidi.
Vakafa vakadaro asi vati ndinoda kutaura kuti hongu ndiri kuyenda asi mapfupa angu achamuka.
Ndokuvamba kwavakazoita Chimurenga chekutanga chakatarisana nezvakanga zvataurwa naMbuya Nehanda, vachisevenzesa Mbuya Nehanda mweya wavo, semweya wemasvikiro anenge achibvumirana nezvakanga zvataurwa naMbuya Nehanda zvenyika.
Vakomana vedu vana Mujuru ivava pavakavamba Chimurenga vava nepfuti havana kungoyenda nzvimbo nenzvimbo vasinganamate.
Vaizvipira kumweya iwoyo vachiti “tauya ndisu vana venyu tichitevedza shoko ramakataura kuti mapfupa enyu achamuka.”
Saka pavakanovhura ndima dzeChimurenga vachivamba kuAlterna Farm izvozvo zveshoko remweya waambuya zvaivaperekedza.
Kana muhondo yedu yeChimurenga hatina kuda kuti zvikanganwikwe naizvozvo imi veProvince ino mukukutendai kwandiri kuita nehurongwa hwamakaita.
Ndinenge ndichiti tichengetedze mazwi akakosha, pfungwa dzakakosha dzakabva kumweya mukuru wesvikiro raana baba nanamai rainzi ndiro svikiro guru.
Tauya kuti tikurukure tichipanana mazano. Ichokwadi kuti kuno kwakamboita bishi. Hatingadewo kufukidza zvakaitika kuno nekuti tiri kuno zuva ranhasi, ayehwa.
Nekunoo kwakaita bishi, tinozviziva izvozvo. Nekunoowo kwaitova nevamwewo vairamba kuti ayehwa maakuzadza province yedu nevamwe vanobva kune dzimwe ndima, vanobva kuMasvingo nokumwe.
Zvikanzi resettlement tatorerwa nzvimbo dzakawanda nevamwe vanobva kunzvimbo idzodzo. Haisi factionalism iyoyo, itribalism yatanga tisingade. Yanga irikoo nekunouku kwete kuMasvingo nekuMidlands chete.
Naikokowo hongu province dzose dzaidawo kuti dzione kuti vanhu vadzo ndovarikuwana nzvimbo dzekurima. Vamwe vanobva kunze vasati vadzipihwa.
Inyaya dzakawanda dzatakatonga kuno navaMuzenda, saka First Lady vangoita emphasise Masvingo neMidlands; ose maProvince ese anga aine tribalism, tribal approach.
Vaida vanhu vavo kuti vave ndivo vanotungamirira vanopihwa ndima, hongu zvakanga zvisina kururamawo kuti tivanze ndima minda inopihwa vokunze, vamwe vomu province vasati vapihwa.
Nanhasi uno tichiri nenyaya yacho. Minister achibva kune province imwe, anoda kutanga azadza nzvimbo dziripo nevanhu vekwake, hazvisi kunzvimbo imwe chete.
Zviri kuvanhu nevanhu, vanhu vasina discipline yakakwana, vasina neideology yakakwana.
Vanhu vanoda ivo kuti vaone kuti hurumende yakatakura vanhu vakati wandei.
Chirwere chatii nacho chatinosungirwa kupodza. Takavamba hurumende yedu tiine history yakanga yakarema.
Hondo payakarwiwa yemushure kwakatenge kwaita vapanduki vainzi ava vapanduki vekwa Nhari.
Mushure mazvo takawana isu vokuManica vose vatiza vanaMukono, vana Mataure vakanga vauraiwa kare vapandukirwa. Why?
Vana Setran Mutambanyongwa, vese vakanga vatiza kubva kuZambia. Vachitiza hanzi vari kutya kuurayiwa naanaTongogara. Why? Pamusana pekuti ivoo vakanga vakuda kuzadza dare reChimurenga nevanhu vanobvawo kuManicaland.
Ndozvakazotsamwisa vamwe ava vachiona mabatirwo avanga vachiitwa ndozvakazotisvitsa pakuti hupanduki hwaana Nhari hwaitwa control.
Ma comrades edu akanga asara, vakada kuranga vose vaibva kuManicaland asi zvimwe zvakazodzivirirwa vana Ndangana vakanga vakutongerwawo kuti vafe vakazonzi ahh chivaregerai.
Hezvo vakanga vasungwa vachinzi ndivo vakoneresa rufu rwavaChitepo. Takumbira vasunungurwe. Vakabuda vakawanda, anaMayor Urimbo, Kadungure, ananaChimurenga, naiye Tongogara akazoregerwa vese vakabuda.
Asi vabuda kudaro, vakomana vaizviita vashandi vakanga vari kuChimoio vakada kuisa mutemo wekuti hapana anopinda pano, tisina isu kumuvheneka one by one.
Vese kubva kunaana Tongogara vanosungirwa kuita apply to join. To join vashandi, to join chimurenga, asi vabuda ava vaive vashandi, vachiti tiri vashandi.
Takazobatira njere dzekuti vasungwe vaiswe mujeri muMozambique. Zvakagonesa kuti tirange vaye vanga vabva kuLusaka vari mujeri vachitorana to take up the revolution and transform it into a proper ZANU-PF revolution. So it could prosecute the struggle properly.
Ndozvatakakwanisa kuita. Asi hatina kudzima mweya nekuti takanga tisingauzive, wokuda kuchinja revolution iyoyo kuti iende mumaoko evamwe tikangodaro muna 76, patakaenda kuGeneva, tadzoka tichironga tichidaidza zvino vamwe kuti vazoti joinawo.
Vana Sekeramai, vana Cde Emmerson Mnangagwa nevamwe ndopavakauya tabva kuGeneva.
Muna 1977 and 1978 kwakaita matalks ainzi Anglo-America talks, the Labour party yekuBritain yaisungirwa kuti ichikurukura nesu nyaya yeZimbabwe yakati isu toga hatikwanise tinosungirwa kuwanawo rubatsiro runobva kuAmerica. Ndosaka yakanzi Anglo-American Talks.
Asi tichiita hurukuro idzodzo takaona uti hapana kwadzinotisvitsa. Takaenda kunana Malta, Tanzania Dar es Salaam back to Lusaka tichingodaro, pasina zvabudirira. KuMinistry of Foreign Affairs kune ainzi Owen, David Owen, ndipo patakaona ana Andrew Young vaiva akamirira aiva represantive veAmerica kuUnited States.
Ndiye atakapihwa nehurumende yeUnited States kuti akwanirane nemaBritish navaOwen vave kuita hurukuro.
Mukudaro kwedu kwaiva kune tribalism. VanaHamadziripi nanaRugare Gumbo ndipo pavakaronga kuti vaite a coup. Asi takanga takwanisa kuchinja the complexion yevatungamiri vehondo. Ushewekunze ndokubva asungwa, Dr Ushewekunze.
Tekere ndokubva asungwa, vese ndokubva vakakatwa vachinoiswa pamahombe-kombe egoronga rakanga rakadhibha zvakati kuti, vachityityidzirwa.
Ushewekunze akarohwa nebutt ye-gun kumusoro, akatsemuka, akaita fracture kumusoro wese.
Vese, Tekere vakarohwavo, vakashushwa vese vaityityidzirwa na Chigove, Chigove ndiye akange atorerwa hukuru nekuti ndiye aiva mukuru weIntelligence and security tisati tavamba the new look yehondo yedu vasiri ku Lusaka.
Zvino Tongogara akanga ati kwandiri ini, Chigova haana fundo uyu, basa iri reIntelligence and Security rakutoda munhu akati fundei.
Ndakafunga kuti wakadaro anodiwa pabasa iri anogowa munhu anoziva murawo, gweta, anogowa munhu ane fundo yepamusoro, anogowa munhu atagara naye mumusangano, anoziva gwara remusangano.
Anogowa munhuwo zvakare ane rudzidzo rwepfuti.
Ndopandakati kuna Tongogara, aaah hooo mada kuti ndisarudze iyeye here? Ndine mukomana andinoziva ataive naye kujeri anonzi Emmerson Mnangagwa.
Asi paakabuda mujeri akati vabereki variku Zambia, ndokubva aenda ku Zambia takazonzwa kuti aenda ku University akanoita law yake, ndinonzwa kuti akapedza kuita Law yake wavakushanda nanaDumbujena mufamily inotungamirirwa naDumbujena.
Dumbujena vaiva Mashonaland West, asi akanga asingadi nyaya yekuenderera mberi nekuda kuvafront runner westruggle ayewa, dzaingoda kutaura dziri shure-shure.
Saka ndakanoti ndoda Emmerson Mnangangwa, ndakanga ndisati ndanyatso muziva zvakanaka asi takanga tambogara tese mujeri kwenguva yakati, asi ndisu takanga tamuti nevamwe ngaaende kunofundira pfuti kuEgypt first, achizoendazve ku China.
Zvino akazenge asungwa nenyaya yekuputitsa chitima chavaridzi engine yechitima kuMasvingo. Ndiyo nyaya yaizenge asungirwa.
Vakamubatisa ndiyani? NdiMichael Mawema, mukoma waNelson Mahwema.
Zvakafungwa Baba iweee, nekusava neruzivo rwakadzama, kuti handivose vatinoti Zanu-PF kana kuvakuru vatinotemba navo.
Kune vakuru vanotengesa, zvino ari kumba kwaMichael Mawema, hoyooo Michael Mawema pafoni, “munhu amuri kutsvaga ari kuno, haa ndokubva wangouya ndokubatwa segurwe vari panzvimbo imwe chete.
Aaah tozonzwa kuti vasungwa and sentence yaivapo ndeye kudimurwa musoro. Kana wateya ma bomber akadaro, law yaiveko yana Smith unotongerwa kufa.
Saka akauya mujeri atongerwa rufu facing that possibility of being hanged. Ahhhh, tikati nesuwo tiri mujeri nana Muzenda, ndikati nhai vaMuzenda imi toita sei? Aaaah Kamba aisevenzera FRAME ichiriko nanhasi, asati ava Vice chancellor vekuUniversity, saka takanga tisingarambidzwe kuti tione malawyer edu.
Tomudaidza, kuti aiwa do what you can, we don’t want him to be hanged. Aaah akaedza nekwaanogona. Finally wakazowana kaburi kadi-diki kuti munhu kana asati ava nemakore anopfura, ndofunga 18 achiri under 18, haakwanise kutongerwa kufa.
Ndiro buri raakabuda naro mukomana uyu, nhasi uno, tainge tichiti aaaaaah. Musi wemaheroes totii apa Emmerson Mnangagwa ndipo paakarara, rest in peace. Saka ndipoo patakamuyamura napo, ndokuzopihwa makore aya ndofunga aiva gumi nemaviri, kana apfuura ipapo.
Apedza hoyo takazonzwa kuti ava kuprison yekuMatebeleland, ariku detention, ndokuzochinjwa ouya kudetention yokuHarare.
Ndopatakazonzwa achikurukura, ndokwaazoburitsirwa ikoko. Aitoti haa ini vabereki vangu vari kunze kweZimbabwe zvikanzi okay go we don’t want to see the face of you again muno munyika nemabhunu, ndokupona kwaakaita akatisiysa tiri mujeri.
Ndopaakazoenda kuUniversity yeku Zambia kunopedzisa Law, ndisati ndamudana ini.
Patakazenge tavakuita revise party yedu patakange tavakunzi rebuilding it and reshaping it ndopandakanzi naTongogara Chiguwo will not do he is not educated chitipai imi.
Ndaive Secretary General chief weparty mukuru wedu weparty, chitipai zita remunhu watingazive. Ndopandakamudaidza ndakati huya akati haya ndingauye zvangu asi tine tsaona yakandiwira baba wangu vakashaya chimbondipai just one month to wind up affairs.
Takati after one month akauya akati tuturutu and joined up to today.
Sekeramayi zvimwe chetezvo akange atandwa paGoromonzi vaenda kunze uku vamboenda kuCzechoslovakia paita split paye Zanu ichivambwa vakange vaendeswa neZapu veZapu vaive in charge yemascholarship vakati vakomana ava havasisiri vedu vakave vekuZapu hurumende ye Czechkoslavakia yakavatanda vari vaviri naJohn someone.
VekuZambia vaive President Rupiya Banda waive President not long ago akakurira kuno vaiorganiser mastudents ekuZambia kuti aende kuSweden akati haa rega tikuise mune vakomana vedu vari kuenda kuSweden tongoti muri vanhu vamwe chete kumaSwedish.
Ndokuenda kwavakaita kuSweden vakanofunda chiSwedish ikoko.
Vakaita Medicine ndokwavakaitira medicine ikoko.
Apedza kudaro akauya ndakanzwa kuti ari kuZambia kuLusaka ndakati aa madzoka huyai kuzotijoina kunoda vanachiremba kuno zvikanzi aihwa tichambopedzisa zvatiri kuita tichauya.
Ndokuuya kwavakaitawo vanaSekeramayi.
Ava anaHushehwekunze vakazouyawo nembiri vachibva nekuno vakauya nePeople’s Movement takati musangano wedu zvino wava necomplexion, tribal complexion national complexion yataida.
Hapana angati zvino vakomana vemusangano vanobva kudivi rimwe chete vanobva kwakasiyana siyana. Kubvunza kuti iwe unobva kupi yakange iri mhosva iyoyo wakabvunza marecruits ar ikupinda manyowani kuti muri vekupe aihwa takange tisingadeba.
Vakauya nemazita ehondo iwayo and that’s how we prosecuted our struggle, that’s how we went on even as we formed the Patriotic Front tabatana zvino zvaingova zvimwe chete.
Hongu paivawo nanaMutinhiri vakange vabva kuZipra vane chichemo chavaivewo nacho ikoko vatobatana zvino nevakomana vekuChimoi ndoomarwiro atakaita nyika ndeyedu tose.
Asi zvinoitika pakati apa dzimwe nguva maambitions dzimwe nguva vanhu vanenge vachikusesekedza kuti pfungwa dzimbofunga.
Masvingo yataurwa namhamha ndakaita meeting navaMahofa vachiri vapenyu mbiri tanzi navaMzembi vakomana vekuMasvingo maMPs vakumbira kuti vakuonei ndakagara navo kuState House vakati tirikunyunyuta nevanhu vaviri vaHungwe navaMahofa.
Tibisirei ava vaviri ndovanyonganisa province yedu ndovanoda kuti tifunge kuti whole province ine factionalism, haasi mafactions itribalism.
Vaviri ava vakanganisa zvakati zvakati ndakati aiwa ndazvinzwa vaMzembi vakatipawo pfungwa dzavo asi pameeting iyoyo havana kutaura.
Vakati ngatisanganei zvekare nekuti kune nyaya yeTongaat Huleet iripo yekuti vamwe vari kuda kupihwa ndima dzakarimwa kare dzine nzimbe asi veSouth Africa vakange vachema nesu vakange vati makutorera vanhu vedu minda yavakange vakarima kare.
Ini yangu pfungwa yakange isiri yekuti vapihwe kwakarimwa asi vapihwe kusina kurimwa vogorimawo tichivabatsira, takange tisina kunzwisisana ipapo.
Musangano uyu takati toupamhidza saka takazoenda kuChiredzi takaupamhidza zvekare ava vakomana ava maMPs vainditi tanetswa nevaviri ava dai matigonera vaviri ava province yedu yaimira zvakanaka zvekuti munzwe zveG40 izvi neLacoste hazvisirizvo.
Chiriko ndechekuti matongerwo eprovince ndiwo ari kuunza gakava vamwe vari kuti aihwa vamwe vari kuti vanaHungwe kudivi ravo risingade maMPs akawanda.
Saka takange tisati tanyatsopedza hurongwa uhu, neniwo ndakange ndichinyatsozvitarisa ndakati okay tichaita reshuffle tigadzirise.
Handina kumboita pfungwa yekuti it’s a question of Lacoste neG40, ndiyo nyaya iriko kuMasvingo iyoyo nanhasi.
Ndakataura pane meeting yapfuura iyo kuti vaMuzenda vakange vari kuMidlands for a long time vakazoti ndakuda kuenda kuMasvingo ndatandwa kuMidlands nevakomana ivo anaEmmerson ava nanaHove.
Hatingambozvirambe izvozvo handidi kunyepa vakazvitaura pachena ivo vana nhingi vachiramba ivo anaEmmerson vachiti hazvisirizvo vachiti ndatandwa.
Ko dai vakange vakafanana vaigoda iyo Lacoste zvakange zvisati zvauya izvo munguva yavaMuzenda.
KuMasvingo ikoko vakaonawo Zvobgo akati tanana akamirawo achiti ndini mukuru kuno achiti mavingei kuno, uyo akange ari tribalist akange asingarambe.
Akanzi navaMusika ari Minister weLocal Governance ko Zvobgo zvauri kungozadza nevanhu vekuMasvingo kwese kwese akati Vice President ndiwo unonzi mudya nehama.
VaMusika vakangozunza musoro vakati aaa anotobvuma zvake saka chaaiseka kuti ndiZvobgo uyo mukoma wavaVice Chancellor veMasvingo — he is a very very nice person.
Ndozvaaitaura Zvobgo akange asingavanzeka yaa ndozvaaitaura it’s tribalism not factionalism but of course tribalism can lead into factionalism as well.
Saka zviri kwese kwese. Mangwana aitaura musi uno, he is a lawyer, aive wekuMash West kuconstituency yake ndokwandakavamba kupa macomputer, iwe handei kuconstituency yako irimberi.
Ndozonzwa akuti akuda kuenda kuMasvingo, ndakaramba ini ndakati I don’t go, zvakanzi vanana Chikoore vari kuti ibva kuno, ndakati that’s the more reason why you must stay there, I will support you hapana angazvirambe.
Aaaa ndakuenda kuMasvingo uko ndikuenda kwaChivi kumadzisekuru angu mazviona.
Kumadzisekuru angu vari kunditi huya kuno ndokubva ndazonzwa kuti aenda ndakati aaaa aaa waenda he had a good constituency kuMash West.
Hamheno kuti nyaya yaaita allege yakanga yakakura here zvekuti aitadza kuiita oppose but oenda kumadzisekuru ake kwaChivi.
Handifunge kuti akazopinda muParliament.
Nanhasi, vachimuramba. Mzukuru ka. Ko ungauye kuno uchiti ndoenda kumadzisekuru? Kunogara nhaka yemadzisekuru? Kune zvakowo vamwe variko vanoti ah ungabve kunze uchida kuti torera basa redu. So the opposition is tough for him but vaicomplainer netribalism kuMash West.
So chirwere chatiinacho, hameno vakazobhabhatidzwa vachinzi iyi iLacoste iyi iG40 papi. VaHungwe naVaKasukuwere mudare redu rePolitburo vakambomutsana.
VaHungwe vachiti mkomana uyu ari kuda kuzvivaka, kuchirehwa Kasukuwere kuti agozotora masimba awane masimba ekuzo succeder President. Saka ari kufamba achiti machairman aripo ibva achida kuisa wake, ndozvaari kuita kwese kwese.
Takazviongororao tikaona uti kana zvirizvo zvaaida kuita, anga asati azviita kwese kwese.
Zvino ipapo, vakanga vasingataure nezve Lacoste neG40.
VeG40 iyi vakazviparira ivo vana Kasukuwere, ndivo vakazvipa zita iroro. Zvakauya sei?
Obama akahwina kuUnited States. A young man ari muma 40s. Tikanzwa kut ana Kasukuwere vakuti ah hurumende yakuda vari muma 40s vadiki ndokwabva G40, vana Obama saka vakambonzi vana Obama ivo vadiki ivavava nekuti Obama ndo age group yake yeforty something ndokwazvakabva.
Havana kupihwa nemumwe izvozvo ayewa vakazvipa izvozvo vachirova matundundu kuti haa tinoda kuti tizopindawo isu yah, vadiki zvino ndivo vakuita take over like vana Obama ah ndakangotarisa ndichiseka zvangu kuti ah.
Ko Obama is in the United States, iwe Kasukuwere uri kungokunguruka zvako uri muno. Uri muno, nyika ine history yayo, kwatakabva ukuku kunotariswa kuti history yako yakamira sei. Muparty imomo wakamira sei.
Ah ndonzwa vamwe vari kuenda kun’anga vana Joice Mujuru ah ah vanoti vakaenda eh kumutumwa kuvapostori vambouya vachienda kun’anga ane tunonzi twui eh utwu tuya tunomhanya maningi mudziva tunenge nyengeredzi yah ndakanganwa zita racho.
Taitutarira tichiti tunogona kushambira zvakakomba.
Zvino aive netuviri twaigara mugate rine mvura tuchi mhanya, aida kuti azoona kuti kanokurira mumwe ndekapi, kamwe kaive iye kamwe kainzi Mugabe.
Zvatinoona! Ndiri kukuudza. Zviri kuvakuru hazvisi kubva kuvadiki izvozvo. Zvino hatuna kumborumana twunhu twacho.
Twakangoramba tuchitoita hukama tuchibhugucha zvakakomba, swimming fast this way swimming fast, ndakatotuonawo. Vakaenda kuna vamutumwa vechipostori vakati ahh, ngatiurayei twunhu twacho hatuna basa. Tunokukonzerai mbiri isina kunaka, hameno kune mamwe machurch kana kune dzimwe n’anga zvaiitwawo ikoko. Vanhu vedu, hameno kuti chiKristu hachina kupinda here zvakakwana. Kana kun’anga ikoko vanozaridzana. Dai vachienda kunotsvaga kurapwawo chimwe chirwere taizvinzwa. Kunotsvaga kuti uve nesimba ringakusvitse paposition yakati kuti. Zvinoitwa izvozvo.
Uyu anonzi Professor Jonathan Moyo, hameno kuti vakasiyana papi nana Comrade Munangagwa. Pane Tsholotsho. Vakamboita Tsholothso vari pamwe chete.
Vaivako kanana Gushungo ari kubhora uyu, Chiyangwa, ndokwavakavamba ikoko zvichinzi machairman ose ngaauye asangane kwaZvimba kumba kwaChiyangwa. Havo murikitira machairperson vonosangana ikoko. Ndokwavaironga ikoko kuti haa VaMugabe vanozoitwa replace here? Tosupporta ani? Tosupporta Mnangagwa? VaMnangagwa vakanga vasiko ikoko. Asi vana Chiyangwa nana Jonathan vaiveko. Hezvo, zvozobva ipapo hanzi ah ngatichinopedzesa nyaya dzedu kuTsholotsho kwana Jonathan. Uyo wainzi ka ndiye mukomborerwi, waiitirwa izvozvo, kana akanzi huya ikoko, akatadza kuenda, iye anoti haa ndakanga ndakabatikana nezvimwe achitaura kwandiri inini.
Asi vakanosungana kuTsholothso ikoko, isu ndobva tazvidimbura. Tikati ah hoo, ndivanani vaiva kuTsholotsho? Ndobva tavaranga zviye vamwe takava suspenda, zvakati kuti.
Naiye Jonathan zvimwe chetezvo we suspended him. But anoti it is at that point yaakaita differ naVaMnangagwa because Mnangagwa did not come out to support them. Wakangoramba akahwanda ari distant from them.
Havo vosuspendwa asi wavanga vachirwira haana kubatwa nenyaya yacho nekuti haana kana kuenda kwaChiyangwa haana kuenda kuTsholotsho eh iroya (lawyer) ka kuti kana nyaya dzacho dzazobuda ndakanga ndisipo.
And chokwadi ndozvakaitikawo, akati handizvizive ndivo vaive nepfungwa dzacho kwete ini.
Zvino ungazomuti newewo waive nepfungwa idzodzo. Anoti ayewa prove it. Wati wosuspendwa kudaro and takamuita advise naMai Mujuru, Jonathan tikati ah don’t do anything just accept. Don’t try to stand as an independent don’t don’t don’t.
Iye akaenda akanoitawo pfungwa dzake he stood as an independent and won ikoko paye. Fine, but after some time you can’t be out of the party wambenge uri nhengo yeparty for so long and say and believe that you can stand alone as an independent.
Akazouya achiti ah kunze uku its too cold. Yah saka patakazobvuma paye kuti ah no let us get vekuTsholotsho back into the fold iye akazotiwo ndakudzokera kuparty. Asi akazoti akataurira Politburo kuti ehh vaMnangagwa, I will never never support you again, never! Hapo ka, kana paripo pakabuda zvino zvondo I don’t know.
Ndokubva azotsvaga dzimwe cases dzaakatipa, mutorododo wakadai wezviito zvavaMnangagwa. Haa zvimwe zvisina kunaka. Vakakonzera uyu mkomana aiva chirema anonzani, vasangana kuimba yemusikana Majonga yah.
Vasangana ipapo Majonga ndiye aidanana nemusikana uyu akanzi iwe kana uchada hupenyu you make a choice wogara pachitofu ichi chiri kupisa or you jump out through the window hameno kuti kana akapihwa those two choices I suppose munhu ipapo unenge usisina pfungwa yakatwasanuka.
Akaona as just one of the two. No ko dai akangoti resist, do what you can I will not do either of the them asi akangovhunduka akava nervous ndokubva asarudza kuzvidonhedza, ndozvatinonzwa kuti akajamba nekuwindow, kujamba nepawindow means storeys down.
Ndoimwe yakanyorwawo iyoyo yanezvimwe zvakati kuti, zvino vaMnangagwa vakati, fine ndichamupindura. Vakandiudza musi uno kuti vakapedza.
He had some 65 pages of reply but nehurwere hwavainahwo he can only stand achitaura perhaps 15 or so minutes but kana asimba he will reply to him.
Ndidzo nyaya dzimwe dzinotivhiringa muparty, personal differences, attacks and ambitions — zvatinoda kuti zvipere.
Ko, we never have had our Presidential system, procedures, unguided by the rules of the party hatina kumbofa tazviita isu kuti mumwe anoti, seni I am President now, ndoti ndoda kusiya ngana, ndoda kusiya mai Mugabe ndoda kusiya Emmerson ndoda kusiya Mphoko as my successor.
It’s contrary to the Constitution I cannot do it, it’s not allowed.
Constitution inoti munhu anosarudzwa kuCongress, ini ndingava ndine candidate ehe, but anosungirwa kunge achikwikwidzana nemamwe macandidates kuCongress and I follow, I am a lawyer also, I follow the law, I follow the regulations very strictly, handidi kuzonzi ndinzi ndakasiya mukadzi wangu aaaah ayewa.
Zvinoitwa nevamwe vari kuma French countries, hatidaro muZanu-PF, tine history yakasvonaka yeparty yedu, tinoda kuti tiitevedzere iyoyo zvakanaka.
Ava vakomana ava vari kupengereka hameno kuti chavari kupengerekera chii, kana achinzi ma supporters ava Mnangagwa vaasingazivi kuti Constitution yedu yakamira sei.
Vanofanira kudzidziswa, it’s a pity kuti they have decided to go that way but we shouldn’t support them and it is right and only right that we should never entertain them. They are wrong and they have been punished by the party and we should not entertain them.Kana vave kuda kudzoka vanoziva gwara, vanoziva kwokuenda to place their pleas, kuti haaa takaona zvakati hatingarambe tiri kunze tava kuda kudzoka kuparty but hatingavadaidzi isu kuti come and be associated with us. No , its completely wrong saka I hope vaMnangagwa you take that advise into account, give them the languish if they want to languish in the dark were they chose to be, we don’t pay them to come back.
Zvinopa appearance of support kuvanhu, vanhu voti aaa ko zvamuri imi vakuru makuva supporter zvakare muchivadaidza kumapurazi muchivadaidza kudzimba. What does that mean?
Ndiyo issue iyoyo iripo, iyo. Iyi Lacoste iyi ndakati ko yakabva nekupi, iye ari kungoti chokwadi handizive kwayakabva nako asi ndakangoyerekana ndapihwa, hameno kuti chaive chibhodhoro here kana kuti chaive chii chakanga chakanyorwa kuti Lacoste. Hanzi ndokubva ndangochibatawo in an innocent way. Chainzi chakanyorwa kuti “I am the boss”, hanzi icup. Aaaaah ehe.
Zvino ndochamurikufirawo ichocho. Kana chiri chi cup ah chirasei, nekuti chaenda mbiri ichochi, zvino munhu angafira chi cup chete?
So no, let us not do that, maprovinces eMidlands neMasvingo, ndokune nyatwa dzevanhu vasirikunzwanana, dzakakomba ikoko. KuMasvingo, the Midlands is different, kungavewo ne one or two but vanga vachinzwanana zvikuru.
Asi sekuru vangu vaGumbo vakangofa vachiti aah munhu ari kunyonganisa zvinhu kwedu ndiEmmerson.
Baba vaChairman weOrganisation yeCoca Cola, Charles, VaMsipa. Takagara navo vaMsipa for a long time vasati vapinda mupolitics saka ndini ndakavati ibvai kwaTodd kuCentral African Party muuye kuANC.
Kana muchishora kuti aah vanaChikerema nanaNyandoro havana kufunda imi makafundaka munenge muchivapa mazano.
Saka ndakavashumairira ndichangobva kuGhana, for a long time ndigere navo nemumwe ainzi Peter Gumbo aibva nekwa Kutama.
Saka ndakavati to join an African Party we must be Africanist. We must have African Nationalism, vakazodaro havo mamushure saka he did not have quite a history asi vakazenge vamuZapu, muZipra vaitawo quite some distance vachienda kuGonakudzingwa vachizodzoka pamaelections zviri zvimwe chetezvo.
Patakaita Patriotic Front vanga vavamo. Saka he went some distance getting some experience. Asi vakanga vasingade Emmerson zvichinzi ndiye ari kukonzera nyatwa dzekuMidlands, ukuwo uku sezvandataura ndivaHungwe namai Mahofa.
Saka the situations in these two are quite different, the more endemic one which is crying for solution is Masvingo.
KuMidlands haiwa vanozviconducter zvakanaka-naka, there are some very good performers variko.
Ok, long, long story asi tauya kuti titi nyaya dzese idzi tinodziti bvuu pachena, muzivewo imi zvimwe zvinokanganisa musangano kuti muzviregerewo.
Zvimwe zvacho zvinobva nekwamuri majournalist anonyora rubbish, absolute rubbish.
Zuva nezuva kana uchiona pepa, zuva nezuva rinofanirwa kuburitsa zita raaMugabe kana nemudzimai. Story yacho, dzinenge dzichinyorwa ipapo hadzina kodzero yekuti dzinganzi inews dzevanhu.
Asi zvazoitika ndezvekuti nekusanzwanana kwedu uku muparty medu vamwe vakava nehukama nanaDaily News nanaStandard vachiisa pfungwa dzavo dzeku criticisana nevamwe imomo.
Isu tosweroti iparty dzanaTsvangirai izvo vanaTsvangirai vakatorerwa kare kare mapepa aya nesu.
Ndisu taane influence yakati kuti, nekuti tinovabhadhara ka kupfuura vanaTsvangirai.
But when all is said and done tinoti isu zvese izvi tikazvitsanangura tikakwanisa kuzvipa mushonga wakakwana tikakwanisa kuzvisolver zvakakwana ndokuvakwa kunoitwa party.
Hainzi pamusoro pezvizvi party yafa, ah ndiwe wafa kana uchidaro. Isu tinoti ndozvinoitika mumaparty, hapana kwazvisingaitike.
Kana chiparty chidikidiki, honai Tsvangirai aaaaah atambura, mai Khupe vakuti ndakuuya kwangu ndega.
Ava vakambenge vatiza vanaBiti nanaWelshman Ncube vakuti tauya asi tauya zvino nezviparty zvedu.
Iye achiti huyai, iye achiziva strategy yake yekuti ava vakauya ndovadzvanyirira tovhara door kuti mapinda asi mototungamirirwa neni saka simba rangu rinenge rawanda.
Huyai vakomana huyai. Hachina kupusa ka, eh hachina kupusa Tsvangirai. Ari kutoti ngativhurei madoor vagorwisana vachiuya.
Asi vese vauya vanenge vakusupporter MDC, MDC pamusoro, kana toenda kuma elections tinenge tasimbarara kupfuura zvatingaite tisina vazhinji vedu ava.
Saka tiri kunanga kuma elections, ngatirambei takadai. Saka ndoda kutenda vakomana ava, zvese zvandiri kutaura vangadai vachizvizivawo. Asi vanokwanisa kuronga marallies akakura saiyoyi.
Takabva kune rimwe rekuMidlands iye zvinezvi, nemamwe ese atakamboita six of them. Iyi yava number eight. Ose anongoda kufanana, ose ane hurongwa hunoratidza kuti vanhu vanenge vapihwa discipline yakanaka. Hapana kurwa, hapana kutukana. Tinogara zvakanaka.
Vari mberi vogara pasi vari shure vomirawo, toteerera. Totererasa shoko rinenge rabva kuvatungamiri. Ndati hurongwa uhu tirambe tinahwo. Tisvike pakuzoenda kumaelections tabva tichingobva muhurongwa hwakaita seuhwou.
Macampiagns edu vakuru onai wo. Onai mufunde kubva kuvadiki vedu. Havasi vadiki ka vana. Vadiki vedu asi vava nemhuri vari kutipa chidzidzo chemberi. Asi tiri kutarisa ramangwana ka, tichikuda kurarama.
Mvura yekuzoturuka pamwedzi unouya kana muchizorimawo tovamba zvakare basa rekurima vataura vaMade vachikupai zvakaitika, vachikupai kugona kwatakaita, hurongwa hwavanahwo hwemainputs tozvichirechedza izvozvo.
Asi pachedu pamunhu woga woga ane mudzimai wake ne vana vake, vane six hectares, or ma plots akati kuti or purazi togadzirira kupinda muzvirongwa izvi, cheCommand agriculture, kwazvo kwazvo kana tiine mvura muma dhamu kwedu. KwaPresidentwo kuchapa kuyamura kune vaya vari kunze kweavo vane mvura muma inputs zvimwe chetezvo.
Tobatanidza zvinobva kwaPresident ne kuCommand kuti tive ne ruvimbo rwakakura tive zvakare negoho rwakakura. Mbiri yedu yekuva variritiri venyika dzose dzemuSadc idzoke kwatiri. We become once again the basket ye Sadc if not of the whole of Africa.
But let’s remain united, in spite of all that might, happen the party comes first. First, whatever differneces we might have, the party comes first.
It brings unity, the unity of us all in the party must be maintained. Kunzwanana pagwara iroro kuti tiri vanhu vakasungwa ne musangano kuva pamwe chete. Rinototi nharo dziri pakati penyu, kusanzwanana kuri pakati penyu chimbokandai pasi. Tirime takabatana tidhonze se madhonza takabatana.
Tidyare takabatana tigokohwa takabatana. Zvobatsira nyika, the country will prosper when individuals continue to quarrel but our country is moving ahead.
Ndozvatinoda kuona izvozvo.
Mamwe masectors ezvicherwa, gold, diamonds, copper and so on tiwachengetedze kwete kuti vamwe vasina hanya nesu vaorganizwa pachivande kuti imi mugopihwa chati tivabvumire. Aiwa.
Ndosaka ndichiti hapana anosungwirwa kupihwa ivhu redu iri, maclaim kana ari ema diamonds, echrome kana gold, tisina kubvimirana. We don’t want corruption hatidi. Zvicherwa zvevanhu izvi. Ngazviende kuvanhu.
Mai vati bvumirai makorokoza kuti varambe vachichera, hatina kumboti makorokoza ngaarege kuchera goridhe asi takati ngavarege kukanganisa nzinzi, magomba voramba vachichera pedyo nenzizi, mavhu ofushira nzizi dzotadza kuerera.
Tininge tapundutsa ani ipapo? Ari kukorokoza kagold kadiki osiya anyangadza nzizi dzedu.
The siltation kungoita makomba pese pese, aiwa zve kana wada kukorokoza idawo kunatsa makomba ako wofushira magomba ako ofushira zvakanaka-naka, kwete kungosiya. They become a danger to our animals, a danger to people themselves vanenge vofamba usiku.
Kukorokoza ngakuve netsika negwara ratinobvumirana naro kuhurumende. Zvisingatikuvadziri nyika yedu.
Kukaita makomba pese pese mumwewo anoda kukorokoza ozoona kune makomba pese pese. Hatidi zvakadaro.
Let’s do it properly. Tinoda kuti munyatso pihwa mazano akanaka, zvino imi munoda kuzvitira kumhanya nekwenyu. Ndingatangirwe. Usina kupihwa mazano.
Ministry of Mines inokupai mazano,itai makadai seenzesai zvakadai zvakadai mayeerarono nevhu ririko. Kumwe kune vhu rakaoma, kumwe kunevhu, kunotoda maimplements chaiwo chaiwo akaoma. Kumwe kune ivhu dete rinochereka. Asi tinenge tichida order ne discipline tinenge tichida kuti our environment should be protected.
Madzishe edu tsika ngadzichengetedzwe. Tinodzida zvikuru-kuru. Hongu tinoenda kumachurch asi machurch anotipawo nzira yekuenda kuna Mwari ne kukumbira kuna Mwari, yakauya nevarungu.
Isu tanga tine nzira dzedu ngadzichengetedzwe dzive nzira dzakanaka. Kudhakwa, upombwe pakati pedu, kusemana pakati pedu hazvidiwe.
Ndizvo zvimwe chetezvo zvakakwirirwa gomo naMoses kuti achinonyora, achizoti ndabva kutaura naMwari zvandaudzwa naMwari zvamunofanirwa kuita. Nekuti akanga aona kuti vanhu vake vanongorwisana, havasisina tsika vakunamata zviumbwa vasisanamate Mwari.
Tinotenda mauya materera manzwa zvatataura kwete, kwete, kwete kuzoita zvondo pakati pedu hatidi.
Ndakuudzai zvimwe zvechokwadi asi hatidi kuti muzoteerana nemapfumo kuti ndozvaunenge uchinditaura izvi. Kuti ndigoitwa sei naPresident, hapana zvatinomboita.Pamusana pekuti ndinenge ndichitora step yakadai kana kuti ndozokuti hausisiri nhingi weparty.
Aiwa. Kana achichengetedza murawo weparty that’s fine tinoshanda tiri tese, takabatana.
Vese vanozviiti G40 vana Kasukuwere, Obama haasisipo.
Saka mava vanhu kwavo ve Zimbabwe. We are Zimbabweans, we have our rules, Zimbabwean rules,we have our history, our Zimbabwean history of the revolution.
We are not Americans. No. So we cannot be Obamas.
We are not British, no we cannot be Blairs. We are Africans, we Zimbabweans, let’s be proud, even where we differ. We all belong, all of us, tingave tinorwisina pakati pedu, asi Zimbabwe is ours at the end of the day, tinenge tichiti nyika ndeyangu. Tinenge tichiti nyika ndeyedu.
Kana mukarovana zvibhakera apa munongodzoka moti tiri vana venhu tarovana zvedu asi isu tose tinoda ivhu, tinoda kugarika kwakanaka.
Tinoda mhuri yedu yeZimbabwe kuti igarike let us be sons of the soil let us be people oriented. Let us be uniters of our people, isu the leaders must be united so that the people can be united.
Akafa achitaura mwana wemaNdebele uyu Joshua Nkomo achiti ‘Peace begins with me, Peace begins with You, Peace begins with all of us’.
16,627 total views, no views today
Emmanuel Bako is a perfect 10